Fetin’ny 26 jona Hanomboka amin’ny zoma ny Podium
Poduim isan’andro no hitranga eto an-drenivohitra manomboka amin’ny zoma 21 jona ho avy izao. Araka ny tatitry ny komity misahana ny fankalazana ny fetim-pirenena eo anivon’ny fiadidian’ny Repoblika, efatra andro mialoha ny 26 jona dia efa hianoka ao anatin’ny asaramanitra ny rehetra.
Eo amin’ny araben’ny fahalovantena, manoloana ny tsangambato Ralaimongo no hanaovana ny hetsika. Hisy ny fiakarana an-tsehatra maimaimpoana isan’andro manomboka amin’io zoma io. Ireo tarika mpankafy ny gadona Rock toa an-dry Iraimbilanja, Kiaka ary Mage 4 no hisantatra izany. Ry Jerry Marcoss, Tsiliva, Dah Mama … kosa no hiaka-tsehatra ny sabotsy raha fiakarana an-tsehatra in-droa miatoana no hisy ny andron’ny alahady 23 jona. Ho an’ny eny amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena eny Mahamasina dia hiaka-tsehatra ao ry Maggie Blanchard manomboka amin’ny 3ora tolakandro amin’ny alalan’ny hira ara-pilazantsara… Ny talata 25 jona hariva kosa vao hisy ny afomanga eny Anosy arahin’ny bal populaire eny Analakely manomboka amin’ny 8 ora sy sasany alina. Lalana maro no ho tapaka vokatr’izany eto an-drenivohitra.